လှည်းဘီးကျောင်းမှ ဆရာကျော်သိန်း၏ တိုင်ကြားတောင်းဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ BMTA ၏ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်များ | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← Future plan of BMTA 2011 to 2013
Committy for Proteaction and Promoting on Child Rights (CPPCR)’s Fihth conference’s statement urged for rights to citizineship for migrant and IDP children →
လှည်းဘီးကျောင်းမှ ဆရာကျော်သိန်း၏ တိုင်ကြားတောင်းဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ BMTA ၏ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်များ	Posted on November 17, 2011	by bmta05 လှည်းဘီးကျောင်းမှ ဆရာကျော်သိန်း၏ နိုဝင်ဘာလ၁၁ရက်နေ့ နေ့စွဲနှင့် ကျောင်းမှ မတရားထုတ်ခံရကြောင်း BMTA သို့ တိုင်ကြားလာခဲ့ပါသည်။ BMTA အနေဖြင့် ထိုကိစ္စအပေါ် စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ဆရာကျော်သိန်းမှ ၁၂ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူ ဒေါ်သဇင်ဌေးနိုင်ထံ မိမိ၏လစာများကို အပြည့်အ၀ရရှိရန်နှင့် မည်သည့်အတွက် ကျောင်း ထုတ်ရသည်ကို ဖြေရှင်းပေးပါရန် ထပ်မံရေးသားခဲ့ပြန်ပါသည်။
၁။ လှည်းဘီးကျောင်း၏ မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော BMWEC မှ ဆရာကျော်သိန်း၏ ရပိုင်ခွင့်ရှိသော လစာ ကိစ္စကို အပြည့်အ၀ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်း၊
၂။ဆရာကျော်သိန်း၏ ကိုယ်ပိုင်သဘောဆန္ဒအရ လှည်းဘီးကျောင်းတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုခြင်း မရှိတော့သည့် အတွက် BMTA ၏ စုံစမ်းဆောင်ရွက်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက် ပြီဖြစ်ပါ သည်။
၃။ဆရာကျော်သိန်းအား ကျောင်းထုတ်ကြောင်း ရေးသားသည့် ဆရာမဒေါ်သဇင်ဌေးနိုင်၏ ရေးသားချက်များတွင် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများအား အသားလွတ် တိုက်ခိုက်သကဲ့သို့သော အရေးအသားများ ပါရှိခဲ့ခြင်းအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ဒေါ်သဇင်ဌေးနိုင်အနေဖြင့် တဦးတည်းကိုသာ ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားရာမှ မှားယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး၊ BMWEC အနေနှင့်လည်း သူတို့အနေဖြင့် ကြိုတင်ဖတ်ခဲ့ရခြင်း မရှိ၍ ထိုကဲ့သို့သော အရေးအသားများ ပါသွားသည်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးမှ သိရသည်ဟု ပြောပြပါသည်။
၄။ ဆရာကျော်သိန်းအား အခြားဆရာ၊ ဆရာမများထက် လစာ၅၀၀ လျှော့ပေးခဲ့ခြင်းမှာ အလှုရှင်၏ ဘဏ္ဍာရေးတာ ၀န်ခံက ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပြီး ထိုနိုင်ငံခြားသူ ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံက ဘတ်ဂျက်အခက်အခဲအပေါ် မူတည်၍လိုအပ်သလို လျှော့ရကြောင်းနှင့် ကျောင်းအုပ်၏ အစီရင်ခံစာအရသာ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။
၁။ ယခုကိစ္စတွင် မလိုအပ်ပဲ ပြင်ပသို့ စာများရောက်ခြင်းသည် အခြေအနေများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အတွက် ဘက်အားလုံးမှ သတိပြုသင့်ပါသည်။
၂။ ဒေါ်သဇင်ဌေးနိုင်အနေဖြင့် မသက်ဆိုင်ပဲနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်ရေးသားသလို ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတွက် တရားဝင်စာထုတ် တောင်းပန်ရန် BMTA မှ ဆရာ၊ ဆရာမများကိုယ်စား တောင်းဆိုပါသည်။
၃။ဆရာကျော်သိန်းသည် ၄လကျော်ကို လစာ၁၀၀၀တည်းရသဖြင့် စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းမှုကြောင့် အခြားဘ၀တူ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် အတူ BMTA သို့ အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်နေ့တွင် အကူအညီ တောင်းခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်း၏စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖေါက်သည်ဟု BMTA မှမယူဆပါ။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွါးသည်ဟု ဆိုသော် လည်း ကျောင်းအုပ် ၏ ဆွေမျိုးဖြစ်သူက အစည်းအဝေး လုပ်နေစဉ် လာရောက်ထိုးကြိတ်သဖြင့် ခုခံရသည်ဟု ပေါ်ပေါက်ပါသည်။ ဆံပင်အရှည်ထားခြင်းကို အကြောင်းပြ သော်လည်း စတင်အလုပ်ခန့်စဉ်က ထိုဆံပင်နှင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အလုပ်ထုတ်သည့် ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ဆရာကျော်သိန်းအနေဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုခြင်း မရှိ၍ BMTA မှသုံးသပ်ချက် မပေးလိုသော်လည်း၊ ဆရာကျော်သိန်းသည် ကျောင်း ဆရာကျင့်ဝတ်များ ချိုးဖေါက်သည်ဟု ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
၅။အကယ်၍ အခြားမိုက်ဂရန့် ကျောင်းများတွင် ဆရာကျော်သိန်း အလုပ်လုပ်လိုပါက လုပ်နိုင်ကြောင်း BMTA မှ ထောက်ခံပါသည်။
၆။ မိုက်ဂရန့်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းအုပ်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ များကြား၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များကြား မကြာခဏ ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်တတ်ရာ၊ မလိုလားအပ်သော ထိုဖြစ်ရပ်များ ဆက်လက် မပေါ် ပေါက်ရေးအတွက် BMTAအနေဖြင့် ကျောင်းအသီးသီးမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပြီး အဖြေရှာ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ရွှေ့ ပြောင်းဒေသဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံး (BMTA)
ရက်စွဲ – ၂၀၁၁ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်။
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်. Bookmark the permalink.	← Future plan of BMTA 2011 to 2013